`Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> Dajinta Hadafka (Somali) - City of Minneapolis
Gudiga magaalada Minneapolis waxa ay ka shaqeynayaan dajinta hadafka, hawlgalka, ujeedooyinka, iyo istaraatiijiyadda ay magaaladu ku hawlgeli lahayd afarta sano ee soo socota. Boggan waxa aad awood u yeelaneysaan in aad eegtaan qoraalka oo aad ogaataan siyaabaha kala duwan ee aad ra'yigiina uga dhiiban kartaan.
Fursadaha ay dadweynuhu ra'yi kaga dhiiban karaan ujeedooyinka afarta sano
La soo xiriir xubnaha gudiga ee degaankaaga
Dhageysiga Dadweynaha Gudiga loo xilsaaray waxa ay ku kulmayaan qolka 317 5ta Maaro 10:00ka aroornimo
Faalada ay ka bixiyaan dadweynaha ee mudadaas na soo gaara waxa ay qeyb ka noqonayaan waxyaabaha lagu soo bandhigo dhageysiga dadweynaha ee loo gudbinayo gudiga magaalada si ay u dhaqan geliyaan kulankooda 26ka Maarso. Si faalada aad noogu soo dirtaan iimeylka ay uga mid noqoto diiwaanka dadweynaha, waxaa waajib idinku ah in aad soo raacisaan Magacaaga oo buuxa iyo cinwaankaaga.
Talaabada xigta iyo sida loo adeegsanayo ujedooyinkaas
Waxa ay dadweynuhu ra'yigoodu dhiiban karaan ilaa 14ka Maarso. Marka la gaaro xilligaas, qoraalka dib ayaa loogu noqonayaa oo lagu dhaqna gelinayaa shirka gudiga ee 26ka Maarso.
Laga bilaabo Abriil, waxa ay magaaladu u adeegsan doonaa hadafka iyo istaraatiijiyadda ay ku hawl galeyso ee lagu saleynayo qorshe hawleed kasta.
Minneapolis waa magaalo koreysa oo la socota magaalooyinka casriga ah ee dunida dhaqaalaheeduna kobcayo lehna degaan wanaagsan, halkaasoo dadku dareemayaaan amaan, caafimaad iyo in ay heli karaan fursado ay ku baraaraan kuna faraxsan yihiin.
Waxa aynu noqon doonaa magaalo....
La siman yahay
Ma jirto kala sareyn dadkuna waa u siman yahay frusadaha horumarka.
Dadku dareemayaan amaan oo heystaan nabadgelyo.
Waxaanu xoogga saareynaa xaaladda dadkayaga iyo degaanka.
Minneapolis waa magaalo dunida la tartami karta, ku faaneysa qowmiyadaha kala duwan lagana heli karo nolol iyo dhaqdhaqaaq kala duwan.
Dadku waxa ay ku xiran yihiin bulshooyinkooda, waxa ay ku xiran yihiin qeybaha kala duwan saameyn ayeyna ku yeelan karaan dadweynaha.
Iyada oo la ilaalinayo dabeecadaha lagu yaqaan magaalada, dadka iyo gaanacsiga magaaladuba waa mid koraya oo horumar ka muuqdo.
Waxa aynu ka shaqeyneynaa ...
Dib u cusbooneysiinta iyo hal abuurka
Fikrado cusub oo horumrinta ah ayaa mar walba soo kordha.
Gaaritaanka natiiijo la taaban karo.
Shaqada wanaagsan ee aan qabano waa mid lagu qiyaaso sida ay u waafqasan tahay ujeedooyinkeena maanta iyo beriba.
Ka qeyb galinta dadweynaha
Qof ra'yigiisa ayuu dhiibtaa waana la dhageystaa.
Shaqaalaha oo loo muujiyo in la qiimeynayo
Shaqaalaha taageero ayaa loo fidiyaa wayna jecel yihiin adeegga dadweynaha.
Dhisitaanka kalsoonida dadweynaha
Dhamaan waxa loo fidiyaa adeegga iyo macluumaadka.
Waxa aynu ku shaqeynaa hab isu Laab furnaanta, hufan isla markaana wax walba la caddeeyo.
Waxa aynu u wada shaqeynaa koox ahaan.
Waxaanu qiimeynaa ka qeyb qaadashada bulshada.
Barbaar ku noolaashaha: Minneapolis waa goob amaan ah waana mid leh nolol dhaqdhaqaaq badan oo isku xiran.
Xaafadaha oo dhan waa amaan, caaafimaad si gaar ahna kuu soo jiidanaya.
Dadka da'da kala duwan ah waxa ay dooran karaan guryo ay kiradooda awoodi karaan, dakhligooda iyo xaalad nololeedkooda ku saleysan.
Xaafadaha waxaa ku yaala waxyaabo dabooli kara baahi maalmeedka iyo ku noolaashaha nolol wanaagsan.
Gaadiid tayo sare leh oo mar kasta la heli karo laguna gaari karo dhinac kasta oo magaalada ah.
Dadka magaalada degan iyo kuwa soo booqdaba waxa ay heli karaan fursado badan ay kula socdaan dhaqanka, farshaxanka iyo madadaalada magaalada.
Magaaladu way koreysaa iyada oo si haboon isugu dheeli tiran.
Minneapolis oo mid ah: Faraqa kala duwanaashaha waa mid meesha laga saaray iyada oo dadka magaalada oo dhan ka qeyb qaadanayaan kuna barbaarayaan
Waxaa wax laga qabtay oo meesha laga saaray kala sareynta qowmiyadaha (oo ay ka mid tahay guryaha, waxbarashada, dakhliga iyo caafimaadka).
Dadka oo dhan, iyada oo aan loo eegin xaaladooda, waa ay u siman yihiin fursadaha xaaladaha kala duwan ee nolosha.
Nidaamka sinaashaha iyo xeerarka u degsan ayaa keenay sinaashaha nolosha ee dadka oo dhan.
Dadka oo dhan waa u siman yihiin waxyaabaha aasaaska ah sida guryaha, waxbarashada, cuntada, daryeelka caruurta iyo gaadiidka.
Dadka magaalada deggan waa lala socodsiiyaa, waxayna arki karaan wakiilka gudiga ee degaanka iyaga oo saameyn ku yeelan kara go'aanada dawladda.
Xarun dhaqdhaqaaqa dhaqaale iyo hal abuur Ganacsiga kala duwan, mid yar iyo mid weynba, bilaabanaya, u soo guuraya, halkan ayay ku nagaadaan kuna koraan
Xoogaga shaqada waa kuwo isku dhafan, aqoon sare leh, una qalabeysan xirfadaha ay baahida u qabto magaalada.
Dadka leh hal abuurka waxaa la siiyaa fursad (sida farshaxanka, cagaar, dalxiiska, caafimaadka, waxbarashada, iyo farsamada sare).
Meelaha baahida ugu badan ka jirto ayaa xoogga la saaraa; fursadaha laga faa'iideysan karana gacanta ayaa lagu dhigaa.
Sharciyada, nidaamka, iyo barnaamijyaduba waa kuwo ku haboon laguna kalsoonaan karo iyada oo la ilaalinayo danta dadweynaha.
Qaab dhismeedka, adeegga daweynaha iyo hantida bulshaduba waxa ay taageerayaan ganacsatada iyo ganacsigooda.
Istaraatiijiyadda magaalada iyo saaxibadeena gobolka waa mid ku saleysan ku guuleysashada dhaqaalaha.
Goobo aad u wanaagsan: Goobaha banaan ee dadku sameeyo iyo kuwa dabiiciga ah waa kuwo isku imanaya degaan ahaana la ilaaliyey
Dhamaan dadka degan minneapolis, dadka booqanaya, iyo shaqaaluhuba waxa ay ku tilmaamaaen goob amaan ah iyo degaan caafimaad leh.
kheyraadka waxaanu u keydinaa jiilka soo socda; inaga oo yareyna isticmaalkooda, wasakheynta oo isticmaalna tamar yar.
Magaaladu waxa ay xafidaa oo keydisaa dhulka, biyaha, iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ah.
Kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada waa mid si haboon loo maareeyey lana horumariyey sida uu iminka yahay iyo mustaqbalkaba.
Wadooyin, dhismayaal iyo dhul banaan oo soo jiidasho leh ayaa calaamad u ah magaalada.
Waxaanu soo dhaweyneynaa qowmiyadaha kala duwan ee soo koraya inaga oo u sameyna naqshad iyo qorshe ku haboon.
Magaalo hawlgal ah: Maamulka magaaladu waa mid shaqeynaya kuna xiran bulshada ay u adeegaan
Go'aamada haboon ee la gaaro ayaa magaalada nooleeya kuna dhaqaaqa hawlo lagu gaarayo ujeedooyinka u degsan.
Shaqaale hibo u leh oo ka qeyb qaata hawlaha magaalada ayaa ka soo baxa bulshada, iyaga oo heysta kheyraadka ay u baahan yihiin si ay hawshooda ugu guuleystaan una horumariyaan qaabka hawl qabadkooda.
Qeybaha kala duwan ee magaaladu waxa ay shaqeeyaan iyaga oo aan is ogeyn iyaga oo kaashanaya istaraatiijiyadda wada shaqeynta ee bulshada.
Hawlgalka magaaladu waa mid la taaban karo, tayo sare leh, ku wajahan in natiijo la gaaro iyo u adeegga macaamiisha.
Kalsoonida dadweynaha waxaa lagu gaaraa Isu Laab furnaanta, la xisaabtanka iyo hufnaanta.
Canshuurta si mas'uuliyad ku dheehan tahay loo maareeyo iyo go'aano maaliayadeed oo dhaxal gal ah ayaa lagu awood maaliyadeed oo mudada gaaban iyo tan dheer.